Bambo la isticmaalay Dagaalkii Labaad ee Adduunka oo badda laga soo saarayo | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Bambo la isticmaalay Dagaalkii Labaad ee Adduunka oo badda laga soo saarayo
Bambo la isticmaalay Dagaalkii Labaad ee Adduunka oo badda laga soo saarayo
Naaqudeyaal ka tirsan milatariga waddanka Poland ayaa billaabay howlgal lagu furfurayo bambo aad u weyn oo uu Ingiriiska isticmaalay xilligii Dagaalkii Labaad ee Adduunka, taasoo dhex ceegaagta salka hoose ee badda Baltic.
Bambadan ayaa ku aaddan meel kanaal ah oo ay maraakiibta isticmaali jireen.
Qiyaasii 750 qof oo dagganaa xaafadaha ku dhow goobtaas ayaa la daad gureeyay. Howlgalkan ayaa ka socda meel u dhow magaalada Swinoujscie, waxaana la filayaa inuu socdo muddo shan maalmood ah.
Bambada, oo lagu magacaabo “Wiilka Dheer” ama “dhul-gariir”, ayaa dhirir ahaan la eg 6m (19ft), halka culeyskeduna uu yahay 5.4 tan.
Ku dhawaad kala badh ka mid ah miisaanka banbadan ayaa ah waxyaabo loogu talagalay inay qarxaan.
Ciidamada cirka ee Britain (RAF) ayaa banbadaas riday xilli ay sanadkii 1945-kii weerar ku qaadeen markab laga lahaa Jarmalka oo lagu magacaabi jiray Lützow, kaasoo halkaas lagu quusiyay.
Khubarada ayaa sheegaya in bambada ay taallo meel 12 mitir hoos usii ah badda, afkeeda oo kaliya ayaana kor usoo baxsan.
Qalab dusha sare laga hagayo ayaa loo adeegsanayaa in lagu soo saaro, naaquudeyaashuna waxay goobtaas isku sii diyaarinayeen dhowr maalmood oo hore.
Banbadan ayaa la ogaaday inay halkaas ku jirto xilli nadaafad badda lagu sameynayay sanadkii lasoo dhaafay.
Poland waligeed horay ulama tacaalin banbo sidaasoo kale u weyn oo biyaha hoostooda ku jirta.
Ciidamada Britain ayaa bambadaas u sameeyay si loogu tuuro bartilmaameed kasta agtiisa, iyadoo marka ay qarax aad u weyn sameyso abuureysa burbur baaxad leh iyo shucaac waxyeello ba’an wata.
Bambooyinka noocaas ah ayey milatariga boqortooyada adeegsadeen intii u dhaxeysay 1944-kii ilaa 1945-kii. Meelaha lagu bartilmaameedsaday waxaa ka mid ahaa xarumihii gantaallada laga tuuri jiray ee ay lahaayeen xoogaggii Naasiyiinta Jarmalka.
Poland waxay ahayd waddankii banbooyinka ugu badan lagu garaacay intii uu socday Dagaalkii Labaad ee Adduunka.
Magaalada caasimadda ah ee Warsaw waxaa dhulka la simay ciidamadii Naasiga.
Bambo si la xakameeyay loo qarxiyo waxay khatar aad u weyn ku noqon kartaa badda Baltic, maadaama ay abuureyso shucaac aad u badan oo waxyeelleyn kara meelo aad uga fog fog goobtaas, sida uu kusoo waramay Wariyaha BBC-da ee ku sugan magaalada Warsaw, Adam Easton.
Qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa ka dhaga adeygay inay aadaan meelo si ku meel gaar ah loogu talagalay inay hoy ka dhigtaan, iyagoo ka cabsanaya in goobahaas ay ku qaadaan fayraska corona
Previous articleSomalida dagan Maraykanka oo aad u isticmaasho Vitamin D-ga.
Next articleHanti Dhowrka Qaranka oo lagu cadaadinooyo in uu Xisaab xilmalaha lagu soo ogo Xasan Cali Kheyre